Jobily volafotsy / Rtoa Rahanitriniaina – FJKM
Ramatoa RAHANITRINIAINA Rivolalaina Olivier
Hankalaza an’Andriamanitra noho ny 25 taona nanaovana ny asa fanompoana
Feno 25 taona no nanaovan-dRtoa RAHANITRINIAINA Rivolalaina Olivier ny asa fanompoany teo amin’ny sahan’ny FJKM – Departemantan’ny Mpiasa sy vola. Hankalaza an’Andriamanitra noho izany Jobily volafotsy izany ny FOIBE FJKM, ka eny amin’ny FJKM MANDROSEZA MIRAY (MAMI) – SPAA 12, ny Sabotsy 19 Jona 2021 no hanokafana azy. Hanomboka amin’ny 9 ora sy sasany maraina ny fotoana ary hanasana ny mpianakavin’ny finoana hanotrona azy amin’io fotoan-dehibe io.
Ny Alahady 19 Septambra 2021 no ivony, izay hotanterahina eny amin’ny FJKM ANTANETIBE ZIONA FAHAZAVANA– SPAA 12; ary ny Alahady 19 Desambra 2021, eny amin’ny FJKM AMBOHIMIFANGITRA FITIAVANA – SPAA 12, no famaranana, izay samy amin’ny 9 ora sy sasany maraina avy ihany koa ny fotoana amin’ireo.
“Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao,…Dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko” (Joba 42: 2,3b), no teny faneva nosafidiany handritry ny fankalazana.
Iza moa RAHANITRINIAINA Rivolalaina Olivier?
Zanaky ny mpitandrina RANDRIAMAMPIANINA (efa misotro ronono, SP 08) izy. Vady navelan’ny Mpitandrina JONHSON Justin (efa nodimandry), izay nitondra ny FJKM Antanetibe Ziona Fahazavana, Tsarahonenana Fiadanana, Ambohimifangitra Fitiavana, Mandroseza Ankadindratombo Miray: SPAA 12.
Niteraka an’i RAJONHSON Fiaro (lahy) sy RAJONHSON Fiahy (vavy) izy. Kilasimandry zazavavy tao amin’ny FJKM Faratsiho, ary ny sekoly FJKM Ambohimahatazana Faratsiho sy ny sekoly FJKM Ambatolampy gara no nikolokoloana sy nitaizana azy.
Rehefa tsy afaka nanohy ny fianarany intsony izy noho ny fahasahiranan’ny Ray aman-dreny dia nanorina sy nanokatra ny sekoly FJKM Antanety Andohariana Faratsiho ( Izay fiangonana notandreman’ny Rainy tamin’izany fotoana izany). Teo no nitsiry ny hetahetany fa handimby ny Rainy izy ka dia nanao fifaninanana hidirana amin’ny Toeram-Panomanana Mpitandrina FJKM izy indimy ( 1992,1993, 1994, 1995, 1996), nefa tsy voaray mihitsy.
Tsara ny manamarika fa maro amin’ireo niara-nanao fifaninanana taminy no efa Mpitandrina tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao.
Taty aoriana vao tsapany fa hay tsy ny ho Mpitandrina no antso ho azy na dia mbola faniriany aza ny asa maha Mpitandrina, fa ny hanao ny asa ao amin’ny Foibe FJKM sy ny maha- vadina Mpitandrina no antso nanirahan’ny Tompo azy izay nahatsapany fa asa fanompoana manokana koa ary tena manana ny lanjany lehibe tokoa.
Zavatra nahafaly azy:
– Tao amin’ny FOIBE FJKM no nahitany ny vadiny ( Pasteur JONHSON Justin) sy nahazoany ireo zanany mianadahy.
– Tao amin’ny asa tao amin’ny FOIBE no nanarenany indray ny alahelony raha tsy voaray ho mpitandrina izy.
– Tao amin’ny FOIBE no nanefy azy amin’ny fahaiza-miaina rehetra nahafahany niatrika ny fiainany sy ny asa fanompoana na teo amin’ny FOIBE na teo amin’ny Fiangonana notandreman’izy mivady ka tombony ho azy izany.
Amin’izao jobily izao kosa no hijoroany vavolombelona, fa tsara ny Tompo ary Mpanao ny tsara amin’ny lafim-piainana manontolo ka tokony hatoky Azy amin’ny fitondrany mahagaga ka hanentanana antsika rehetra izany.
Amin’izao jobily izao ihany koa no hanavaozana indray ny fanolorantena ho amin’ny fanompoana an’Andriamanitra ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany mandra-pialan’ny fofon’aina.